အရူး-ျီးပမ်း … ဖွသူများသို့ ….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အရူး-ျီးပမ်း … ဖွသူများသို့ …..
အရူး-ျီးပမ်း … ဖွသူများသို့ …..
Posted by etone on May 10, 2013 in Community & Society, Critic, Health & Fitness, Parenting & Pregnancy, Think Different | 20 comments
etone ဘ၀ တစိတ်တပိုင်း ရွှေတောင်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်သယ် သေဆုံးမှု
( ဒီပုံစံအတိုင်းဆို … နိုင်ငံတွင်းက .. ဆရာဝန်တွေ ..ဆေးကုဖို့ တွန့် ပြီး …. ပြည်ပပဲရောက်ကုန်တော့မလား ၊ စီးပွားရေးပဲ ပြောင်းလုပ်တော့မလားမသိ …. ။
ရဲတွေဘက်တားဂတ်ထားပြီး ဆူအောင်လုပ်တုန်းက မအောင်မြင်လို့ .. ခုဆရာဝန်တွေဘက် … မြှားဦးလှည့်လာပြီ …. ဆရာဝန်တွေ ကပ်ဆိုက်တယ် .. ခေါင်းကျိမ်းပေတော့ပဲ ….
အဟမ်း … အားနေလို့ လက်သရမ်းတယ်ပဲပြောပြော .. ၀ါသနာ ပါလို့ အာဝင်ချောင်တယ်ပဲပြောပြော … မိမိရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို နည်းနည်းပွားခွင့် ပြုပါ အရပ်ကတို့ရေ …. ။ ကိုယ်ပိုင် ထင်မြင်ချက်နဲ့ ထောက်ပြရေးထားတာကြောင့် … တစုံတဦးအပေါ် ထိခိုက်နစ်နာမှု ဖြစ်လာခဲ့လျှင်လည်း … ဆောရီးပါလို့ … ကြိုတောင်းပန်ထားပါရစေ … )
အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ …. ဆေးရုံက နိုက်ဂျူတီ ကျတဲ့ ဆရာဝန်တွေရဲ့ ပေါ့လျှော့မှုရှိခဲ့တဲ့အပြင် ၊ လူနာဘက်ကလည်း အခြေခံ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ အားနည်းခဲ့တယ်လို့ ဝေဖန်ချင်ပါတယ် ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကတည်းက ၊ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေ မခံယူခဲ့တာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် .. ဒါကလည်း အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို ဗဟုသုတ အားနည်းခဲ့တာကိုး … ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ယောက်က …ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလမှာ အနည်းဆုံး တခေါက်လောက်တော့ မဖြစ်မနေ ၊ ကျန်းမာရေးပြသနာတစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုကြောင့် … ဆေးပေးခန်းသွားရမယ့် .. အခြေနေတွေဖြစ်ခဲ့ဖူးမှာပါ … ။ ဒါကို နီးစပ်ရာ အပ်ပုန်း ၊ အရပ်လက်သည် ၊ ကွမ်းယာဆိုင်က ဆေးတွေသောက်ရင်း ….ကလေးတစ်ယောက်မွေးဖို့ … မိမိမှာ လုံလောက်တဲ့ ကျန်းမာရေးမျိုး ရှိရဲ့လား ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိရဲ့လားဆိုတာ … သတိမထားမိလိုက်ခင်ပဲ … နေ့စေ့ လစေ့ဖြစ်လာကြတယ် ….. ဗိုက်နာခါနီးမှ ဆေးရုံတက်တဲ့ အခါ … လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုမျိုး မလုပ်ထားခဲ့တော့ .. မိမိကိုယ်တိုင်က ဘာရောဂါရှိမှန်း မသိပဲ ချက်ချင်း ကောက်ခါငင်ခါemergency ပြသနာတွေ ဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့ … ။ မမွေးခင်ကတည်းက အနေထားမှန် မမှန် အပ်ထရာစောင်းရိုက်ကြည့်တာမျိုး ၊ မိခင်မှာ နှလုံးရောဂါ ရှိမရှိစစ်တာမျိုး ၊ သွေးရောဂါ နဲ့ အခြားသော ရောဂါတွေ ရှိမရှိ စစ်ထားတာမျိုး မရှိလို့ .. အခုလို ရုတ်တရက် အသက်ဆုံးပါးရတယ်လို့ လူဗြိန်းတွေး တွေးမိပါတယ် … ။
ဆေးရုံဆေးပေးခန်းတွေ သွားလျှင် စရိတ် စက မတတ်နိုင်လို့ …. မသွားပါဘူးလို့ ဆင်ခြင်မျိုးကြားရတတ်ပေမယ့် … အစိုးရဆေးရုံတွေက … ပြင်ပလူနာဌာနလိုမျိုးတွေမှာ စာအုပ်လုပ် ၊ ကိုယ်သောက်မယ့် ဆေးဝယ်ရတာကလွဲလျှင် .. ဘယ် ဆရာဝန် ၊ နက်စ်ကိုမှ တပြားမှ ပေးစရာမလိုပါဘူး ။ ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေး ဌာနတွေလည်း ရှိပါသေးတယ် ။ အပ်ပုန်းတို့ အရပ်လက်သည်တို့ ဆီပေးရတဲ့ အဖိုးခထက်တောင် အများကြီး သက်သာနေပါသေးတယ် … ။ ကိုယ့်အလှည့်ကျဖို့ လူစောင့်ရတာက လွဲလျှင်ပေါ့လေ … ။
ဆေးရုံတွေမှာ .. ညဘက်ဆို ဂျူတီကျတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ တာဝန်ခံဆရာဝန် ၊ သူနာပြုအရေတွက်က နေ့ခင်းဂျူတီကျတဲ့ အရေတွက်ရဲ့ ထက်ဝက်မျှသာပဲ ရှိကြောင်းလည်း သိရပါတယ် … ။ လောလောလတ်လတ် နေကောင်းနေတဲ့ လူနာက အမောဖောက်နေတဲ့အချိန် …. သွားခေါ်လို့ မလာတာက … ညဉ့် ဦးယံအချိန် ဂျူတီဝင်ရတဲ့ သူတို့ရဲ့ ပေါ့လျှော့မှုလို့ ပြောလို့ ရပါတယ် ။
လူနာက .. ချက်ချင်း အမောဖောက်သွားတာကို ကြည့်ရခြင်းအားဖြင့် … နှလုံးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ရောဂါမျိုး … ဓါတ်ခံ ရှိတဲ့ လူလို့ ယူဆပါတယ် (ဆရာဝန်မဟုတ်လို့ … အသေးစိတ်နားမလည်ပါဘူး … ) ကိုယ့်ရောဂါ ကိုယ်မသိခဲ့တာကြောင့် … မီးဖွားချိန်အတွက် ပြင်ဆင်မှုဘာမှ မရှိခဲ့တာ … အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ အားနည်းတာရော ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စနစ်တကျ မရှိခဲ့ကြောင့်ရောပါပါတယ် … ။
ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့် မိခင်ရော ကလေးပါ အသက်ဆုံးရရှာတယ် … စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ … ။
တာဝန်ကျသူတွေကလည်း ပေါ့လျော့ခဲ့သလို ၊ လူနာကလည်းကိုယ့်ရောဂါနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကြိုတင်သိပြီး ပြင်ဆင်ထားခဲ့ခြင်း မရှိတာကြောင့် … ထန်းသီးကြွေခိုက် ၊ ကျီးနင်းခိုက်အဖြစ်မျိုးကြုံရတာပါ ။ တချို့သော မီဒီယာတွေကနေ သတင်းအဖြစ်နဲ့မဟုတ်ပဲ … ၄င်းတို့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို ထည့်သွင်းစောင်းပေးရေးတဲ့အတွက် အစိုးရ ဆေးရုံတွေမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ဆရာဝန်တွေ ၊ သူနာပြုတွေ၊ ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းတွေ နဲ့ …(ပြည်သူလူထု) လူနာတွေကြား အထင်မြင်လွဲမှားမှူတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ၊ လူနာတွေကလည်း အစိုးရ ဆေးရုံတွေကို အားကိုးလိုစိတ်လျော့နည်းလာနိုင်သလို …. ဆရာဝန်တွေ ၊ သူနာပြုတွေကလည်း အစိုးရ ဆေးရုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ကို လက်ရှောင်လာပါလိမ့်မယ် … ။
အဲ့လို အခြေနေရောက်တဲ့အခါ .. private ဆေးရုံကြီးတွေမှာလည်း တက်မကုနိုင် ၊ နိုင်ငံခြား ထိလည်းသွားမကုနိုင်တဲ့ ကျွန်မတို့လို အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် …. နစ်နာရပါလိမ့်မယ် … ။
အစိုးရ ဆေးရုံတွေမှာ ပျက်ကွက်မှုတွေ ၊ လစ်ဟာမှုတွေ၊ တာဝန်မဲ့မှုတွေ၊ အဆင်မပြေမှုတွေ … လိုအပ်ချက်တွေ ရှိစမြဲပါ …. ။ ပြည်သူတွေဘက်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ ခံစားချက်ကြောင့် မရေမရာ စာမျိုးရေးပြီး ဖွတယ်ဆိုတာထက် … မြင်သမျှကို အကျိုးကြောင်းစီလျှော်အောင် အသေးစိတ်ထောက်ပြဝေဖန်သင့်တယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ် ။ ဖွံ့ ဖြိုးစဲနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဦးပိုင်းကာလမှာ … အဖက်ဖက်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာတွေ ရှိစမြဲပါ ။ အဲ့လို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ရမယ့် အထဲ … မိမိတို့ရဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ … စိတ်ဓါတ်လေးတွေပါ ….. ပြင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာလေး … မမေ့လျှော့ဖို့ .. လက်တို့ ပါရစေလားနော် ။
အောက်က စာကတော့ FB ထဲမှာ ဒီနေ့ ဖတ်ရတဲ့ ဓါတ်ပုံနဲ့ …ဆောင်းပါးပါပဲ … ပြန်ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် … ။ credit to : ခွန်ဒီးယမ်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရွှေတောင်မြို့ တွင်ပြည်သူဆေးရုံမှ ဆရာဝန်နှင့် တာဝန် ကျ ၀န်ထမ်းများတာဝန်မဲ့ မှုကြောင့် မိခင်ရော ကလေးပါသေဆုံး (ပေးစာ)
မေလ ၉ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်
ရွှေတောင်မြို့ပြည်သူဆေးရုံသို့ကလေးမီးဖွားရန် ရွှေတောင်မြို့ သ ရက်တောရပ်ကွက် သရက်တောလမ်းနေ မောင်ဇေလင်းထက် ၏ ဇနီး (ဘ) ဦးမောင်မြင့် ၏ သမီး မယုဇာလှိုင် အသက် (၂၉) နှစ်သည် မီးဖွားရန် (၆.၅.၂၀၁၃)နေ့နေ့ လည်းပိုင်းတွင် ဆေးရုံသို့ မွေးလူနာအဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ ပါသည်။
(၇.၅.၂၀၁၃) ညနေပိုင်းအထိ မွေးလူနာမှာလန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိ နေပြီး ည(၉)နာရီတွင် မွေးလူနာမှာ အမောဖေါက်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၏ ဝေဒနာ ခံစားရပါသည်။
ယင်းအချိန်တွင် လူနာပိုင်ရှင်မှာဆေးရုံမှ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ကျ ဆရာဝန်းများထံ (၃)ကြိမ်သွားရောက်ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသည့် အတွက် မီခင်ရောကလေးပါ ည(၉း၄၅) နာရီတွင် သေဆုံခဲ့ ပါသည်။
သို့ အတွက် အရေးကြီးချိန်ရောက်နေသော်လည်း တာဝန်ကျေပွန်စွာ လူသားပြီသစွားကျန်မာရောဆောက်ရှောက်မှုမပေးနိုင်သော ရွှေတောင်မြို့ နယ်ပြည်သူဆေးရုံမှ ဆရာဝန်နှင့်ကျန်မာရေ၀န်ထမ်းများအား အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
Posted From ပြည်သတင်းလူငယ်
credit : ခွန်ဒီးယမ်
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာထဲ မှာ အိုင်ယာလန် မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် တစ်ဦး ဆေးရုံမှာ သေဆုံးခဲ့တာ အကြီးအကျယ် သတင်းဖြစ်ခဲ့တာ။
မွေးဖို့နေ့မစေ့ခင် သားလျှောသလို ဖြစ်တာမို့ ဆေးရုံ မှာ ကလေးကို ဖျက်ပစ်လိုက်ဖို့ ကာယကံရှင်တွေက တောင်းဆိုခဲ့တာကို ဆေးရုံက ဖျက်မပေးခဲ့ဘူး။
နောက်ဆုံး အမေပါ အသက်ဆုံးခဲ့တာ။
သေဆုံးသူ မိသားစု ရဲ့ အပြော ကတော့ ခရစ်ယာန်ဘာသာ အယူဝါဒကြီးစိုးရာ နေရာဒေသမို့ ဆေးရုံက တာဝန်ရှိသူတွေက ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ခွင့် မပေး တာမို့ လို့ ပြောခဲ့တယ်။
အခုတော့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့် ဥပဒေ အတွက် စကားပြော(အငြင်းပွါး) နေကြဆဲ။
ပြောချင်တာက ဆေးရုံက တာဝန်မယူခဲ့တဲ့ အကြောင်းရဲ့ နောက်မှာ ဆေးပညာနဲ့ မဆိုင်တဲ့ သွယ်ဝိုက် သက်ဆိုင်မှု တွေ ကြောင့်လဲ လူနာတွေ ဒုက္ခရောက်တတ်ပုံ လေးမြင်အောင်ပါ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဖက်နားနဲ့ နားထောင်ပြီး ဆုံးဖြတ်တာ ကတော့ အမှားနဲမယ် ထင်တာဘဲ။
တုံကလေးရေ ဒီကိစ္စမှာ ဘ၀င်မကျတာက ၃ ခါတိတိသွားပြောတာတောင်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာပါပဲ
နယ်ကလူတွေက ဆေးရုံ၊ ရုံး၊ ရဲစခန်း ဆိုတာကိုအရမ်းကြောက်သလို သွားရင်လည်းအရမ်းမျက်နှာငယ်ရပါတယ်။
ူလူနာရှင်တွေက လူနာကိုကြည့်ပေးရင်း လာတာနောက်ကျတယ် ဂရုမစိုက်ဘူး ဗဟုသုတမရှိဘူး
ဆိုပြီး အော်ငေါက်ရင်တောင် ကျေးဇူးကြံဖန်တင်တတ်ကြတယ်။
သူ့ခမျာ ဂရုဏာ ဒေါသောလေးနဲ့ပြောရှာတယ်ဆိုပြီးတော့ အကောင်းမြင်ပေးတတ်ကြပါတယ်
ချစ်ကြတယ် ပြည်ဆေးရုံတောင်မသွားပဲ ရွှေတောင်ဆေးရုံပဲအားကိုးကြတဲ့အထိ
ဒါပေမယ့် အခုတလောကိစ္စတွေမှာတော့ အရာရာထစ်ခနဲဆို မီဒီယာကနေဖွနေကြတာကိုတော့ မရွှေကြည်လည်းသဘောမကျလှဘူး။ အရာရာ ဆန္ဒပြနေကြတာရောပေါ့။
အစစအရာရာ နှစ်ဘက်မျှပြီး အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေလို့ပဲ..။
ဆြာကြီး ရန်ကုန်ဘဆွေရဲ့ ချစ်ဇနီး သို့ ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှာဖတ်ကြည့်ပါ….။ ရန်ကုန်မှာ ရှာရတာလွယ်ပါတယ်….။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရင်က ဗမာတွေ မညံ့ဘူးဆိုတာ ပြနေလို့ပါပဲ…။
အဲ့စာအုပ်မှာ သူ့ဇနီးဆီကို အသေးစိတ်မှာနေတာ (ကျန်းမာရေးအတွက်) ကိုပြောချင်တာလား အဘနီ
” လူနာပိုင်ရှင်မှ ဆေးရုံမှ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ကျ ဆရာဝန်းများထံ ၊
(၃) ကြိမ်သွားရောက်ပြောကြားခဲ့ ပါသည် ။
မိခင်ရော ကလေးပါ ည(၉း၄၅) နာရီတွင် သေဆုံးခဲ့ ပါသည် ”
E Tone ရေ ။
ဒီမိုခေတ် ရောက်လာတော့ လည်း ၊ တစ်သက်လုံး အနှိမ်ခံလာခဲ့ရတဲ့ ၊
နောက်ဆုံးပေါ် မီဒီယာ မင်းသားက လက်စွမ်းပြပြီပေါ့လေ ။
အမှန်ကတော့ မီဒီယာ မင်းသား လက်စွမ်းပြနေတာ ၊
ဆရာဝန် လူတန်းစား တစ်မျိုးထဲကိုတော့ မဟုတ်ရှာပါဘူး ။
လူတန်းစား ပေါင်းစုံ အဆော်ခံ / ထောက်ပြခံ နေရတာပါပဲ ။
အဲဒီ အထဲကမှ ဆရာဝန်တွေက ပြန်ပြောနိုင်အား ရှိလို့ ပွဲဆူနေတာပါ ။
အဘ အခု ဖတ်နေတဲ့ တရားသူကြီး ပြေလွင်မြင့် ရဲ့ ၊
တိုင်းသူပြည်သားတွေကို အမှန်တရား ပြန်ပေးပါ ဆိုတဲ့ ၊
ဆောင်းပါး ပေါင်းချုပ်လေးလဲ တော်တော် ကောင်းတယ်ကွယ့် ။
တရားသူကြီးတွေကို မီဒီယာ နှင့် Laymen တွေက ဝိုင်းဆော်တဲ့ အကြောင်း နှင့် ၊
တရားသူကြီး နှင့် တရားခွင် တွေရဲ့ သဘော သဘာဝ အကြောင်း ရှင်းပြထားတာ ။
ဗဟုသုတ နှင့် အတွေးအမြင် တော်တော် တက်စေတယ် ။ ဖတ်ကြည့်သင့်တယ် ။
အချက်အလက် အမှန် တွေကို သေချာ မသိသေးချိန်မှာ ၊
တစ်ဘက်ဘက်ကို အပြစ်တင်လို့ မရပါဘူးကွယ် ။
တကယ်လို့ ၊ အပေါ်က စွပ်စွဲ နေသလို ၊ အမေါဖေါက် နေတာကို ၊
(၃) ကြိမ် တိတိ သွားရောက် အကြောင်းကြားပြီးတာတောင်မှ ၊
လာရောက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိလို့ လူနာ သေဆုံးခဲ့တာ အမှန်ဆိုရင်တော့ ၊
လာ မကြည့်ပေးသူရဲ့ အမှား လို့ ထင်ပါတယ် ။
( ဆေး မရှိတာက တပိုင်း ၊ လူနာ ကို ဟန်ဆောင်နေတယ်လို့ ထင်တာက တပိုင်း ၊
အလုပ်များနေတာက တပိုင်း ၊ ဖြစ်လာပြီဆိုမှတော့ ခံကြပေါ့လေ )
( သြဇီမှာ ဆိုရင်တော့ ) အဲဒီ ဆရာဝန် နှင့် သူနာပြုတွေ ၊
လိုင်စင် အသိမ်းခံရယုံတင် မကဘူး ၊ ထောင်ပါကျမှာ သေချာပါတယ် ။
( ဒီဖက် နိုင်ငံတွေမှာက လူ့ အသက် ကို အရမ်း တန်ဖိုးထားကြတယ်ကွယ် )
မြန်မာပြည်က လူတွေရဲ့ အသက် ကတော့ တန်ဖိုး နဲနဲ နည်းနေပုံပဲ ။
သိပ် ဂရု မစိုက်တာ တွေ့နေရတယ် ။
စစ်အစိုးရ လက်ထက်က ၊ စစ်အစိုးရက ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ပြီး ၊
လူတွေကို တန်ဖိုးမထား လုပ်ခဲ့တာတွေရဲ့ ဆိုးမွေ ပေါ့ကွယ် ။
အချက် အလက် အမှန် တွေကို သေချာ မသိရသေးတော့ ၊
သိပ် မဝေဖန်ချင်သေးပါဘူးကွယ် ။
““… အစိုးရ ဆေးရုံတွေမှာ ပျက်ကွက်မှုတွေ ၊ လစ်ဟာမှုတွေ၊ တာဝန်မဲ့မှုတွေ၊ အဆင်မပြေမှုတွေ … လိုအပ်ချက်တွေ ရှိစမြဲပါ …. ။ ပြည်သူတွေဘက်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ ခံစားချက်ကြောင့် မရေမရာ စာမျိုးရေးပြီး ဖွတယ်ဆိုတာထက် … မြင်သမျှကို အကျိုးကြောင်းစီလျှော်အောင် အသေးစိတ်ထောက်ပြဝေဖန် သင့်တယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ် ။““…
မလာချင်ဘဲနဲ့ မိသားစုနဲ့ခွဲပြီး ပိုစတင်ကျရာလာခဲ့ရှာတဲ့ (သဘောထားမပြည့်တဲ့) ဆရာဝန်ရယ်.. ငွေမရှိ ဗဟုသုတမရှိ ချို့တဲ့ရှာတယ် လူနာတွေရယ် တွေ့ကြလေသောအခါ… အထက်ပါဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ ကြုံရရှာတယ်..။
ဒီခေတ်မှာမို့လို့.. ကြားရတာပါ.. ဘယ်သူမှမသိလိုက်.. ဖြစ်ပြီးမှတော့လို့ ထားလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်တွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ… (ပြည်သူတွေဆီက တိုင်စာတွေ စိစစ်နေသူများ အသိနေမှာပေါ့)
သဘောထားမပြည့်တဲ့ လို့ ပြောထားပါတယ်နော်.. ဆရာဝန်ထုကြီးကို ပုတ်ခတ်မိမှာစိုးလို့
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ။
ကော့မန့် ပေးသွားပါသော … ကိုပေ ၊ အ ရီးလတ် ၊ မမရွှေကြည် ၊ အဘနီ ၊ အဘဖော နဲ့ ကို ရွာစားကျော်တို့ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဒါ့ပြင် ကော့မန့်မပေးပဲ အသံတိတ်ဖတ်သွားတဲ့ လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ။
တယောက်ချင်းစီ ပြန်ပြီး ကော့မန့် ရေးဆွေးနွေးချင်ပေမယ့် … အချိန်မတတ်သာလို့ ….မပြန်နိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ ။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်က ကာယကံရှင်နေရာမှာရော ၊ သူ့ရဲ့ မိသားစုတွင်းကလူရော မဟုတ်တာကြောင့် .. အခြေနေမှန်ကို အသေးစိတ်လည်းမသိ ..ထပ်တူကျအောင် မခံစားနိုင်တာ ၀န်ခံပါတယ် ။
အစကတော့ ဖွဘုတ်မှာ ဖတ်ရတဲ့ ပို့စ်တပုဒ်အောက်မှာ ကော့မန့် နည်းနည်းရေးမလို့ပဲ ရည်ရွယ်တာပါ … တကယ်တမ်းရေးချလိုက်တော့ .. အများကြီး ဖြစ်သွားတာနဲ့ …ပုံကိုပါ ဒေါင်းလော့လုပ်ပြီး ပိုစ့်တပုဒ်အသွင်ပြောင်းသွားတာပါ … ။
ဆရာဝန်တွေ၊ သူနာပြုတွေ .. တာဝန်မဲ့တာတွေကြောင့် … အသက်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ အဖြစ်တွေ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ ဒုနဲ့ဒေးပါ … ။ဆေးရုံတွေ သွားလျှင် မချဉ်မငံ ဆက်ဆံခံရတဲ့ အဖြစ်တွေလည်း လက်ရှိ ရှိနေစဲပါပဲ .. ကိုယ်တိုင်လည်း … ဆေးရုံကြီးမှာ အလားတူအဖြစ်မျိုး ကြုံခဲ့ရပြီး စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်ခဲ့ရဖူးပါတယ် … ။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် .. တာဝန်ချိန်မှာ ပျက်ကွက်မှုအတွက်ကတော့ … အဖြစ်မှန်ကို သေချာ ဖော်ထုတ်ပြီး ၊ ထိုက်သင့်တဲ့ ပြစ်ဒဏ် ခံသင့်ပါတယ် … ။ ဒါက အကြောင်းရာ သတ်သတ်တခုပါ ။
အခု ဖွဘုတ်မှာ တက်နေတဲ့ သတင်းက ….အစိုးရဆေးလောကက လူတွေကို တားဂတ်ထားတယ်ဆိုတာထက် … ၊ လူထု အုံကြွမှု ဖြစ်အောင် သက်သက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ မြင်ပါတယ် ။ Vinyl တွေထုတ်တယ် .. ဆိုင်းပုဒ်တွေထောင်ထားတာအပြင် ရေးထားတဲ့ စာသားတွေ၊ အလင်္ကာမြောက်အောင်ရေးသားထားတာတွေက … ဆီလျှာ်နေတာကိုပဲကြည့် … တဦးတယောက်/တသင်းတဖွဲ့က ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ … ဆူအောင် ဆွချင်ပုံရပါတယ် … ။ ဒီထက်ပိုပြီး ပြောရလျှင် … ပူဆွေးသောက ရောက်နေတဲ့ မိသားစုကိုရော ၊ သေဆုံးသူကိုပါ ခုတုံးလုပ် အမြတ်ထုတ်ပြီး .. တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်အောင် လုပ်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးပါ … ။ ဒီဖြစ်ရပ်နှစ်ခုကို .. ကွဲပြားစွာမြင်နိုင်စေဖို့ …. ကော့မန့်ရေးမယ်ကြံရင်း .. ပို့စ်တပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။
မှန်ပါတယ် E Tone ရေ ။
ဒီမို ခေတ်ဦးမှာ ခါတော်မှီ နိုင်ငံရေး လုပ်စားချင်တဲ့ သူတွေ ၊ ဖွချင်တဲ့သူတွေ ၊
မိုးဦးကျ မှာ မှိုပွင့်လာသလိုပဲ အပျိုင်းအရိုင်းကို ပေါ်လာကြတာလေ ။
( ဟိုးအရင်ကတည်းက အနာခံ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ NLD ၊ ၈၈ တွေကို လေးစားပါတယ် )
ဒီလိုပါပဲ ၊ အချိန်တစ်ခုတော့ သည်းခံ စောင့်ရမှာပေါ့ ။
တစ်ချိန်ချိန် ကျရင်တော့ settle ဖြစ်သွားမှာပါ ။
settle မ ဖြစ်ခင်မှာ တိုင်းပြည်ပျက်သွားတော့လဲ ကံပေါ့လေ ။
အချိန်တစ်ခုတော့ သည်းခံ စောင့်ရမှာပေါ့ ။
ဆိုတဲ့ စကားလေး သဘောကျလို့ …. BC ပေးပါတယ် ..
အဘပြောတဲ့ စာအုပ်လည်း ရှာဝယ်ဖတ်ပါဦးမယ် … ။
(Vinyl တွေထုတ်တယ် .. ဆိုင်းပုဒ်တွေထောင်ထားတာအပြင် ရေးထားတဲ့ စာသားတွေ၊ အလင်္ကာမြောက်အောင်ရေးသားထားတာတွေက … ဆီလျှာ်နေတာကိုပဲကြည့် … )
ဟုတ်ပါရဲ့နော်၊ မအိတုံပြောမှပဲ မြင်မိတယ်။
အစ်မကတော့ ဆေးရုံမှာ အခက်အခဲတွေရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သားကိုမွေးတုန်းက မအူပင်ဆေးရုံကြီးမှာ ၁၁ရက်တောင်ကြာခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ မီးမပျက်တဲ့ည တစ်ညမှ မရှိဘူး။ ညတိုင်း မီးပျက်တယ်။ မီးပျက်ပြီဆိုရင် ခဏနေရင် မီးစက်မောင်းပြီး ခပ်မှိန်မှိန်ထွန်းကြတယ်။ တစ်ညတော့ မီးစက်ကလည်း မောင်းမရဘူး။ မိုးအလင်းထိကို မီးပျက်ခဲ့တာ။ အဲဒီညမှာ ရိုးရိုးမွေးတဲ့ မွေးလူနာက ဗိုက်နာပါရော။ မှောင်ကြီးမဲမဲထဲ ဘေးခုတင်က လူနာစောင့်တွေက ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပေးတယ်။ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးတွေ ထွန်းပေးကြတယ်။ ညတာဝန်ကျဆရာဝန်က ညှပ်ကိုင်၊ သူနာပြုဆရာမက ၂ယောက်၊ လူတွေက တရုန်းရုန်း၊ လူနာက တအားအော်၊ အဲဒီလိုမျိုး။
မီးမလာတော့ သီးသန့်ခန်းထဲမှာ သွားမမွေးနိုင်ကြဘူး။
ပြီးတော့ သားဖွားဆောင်မှာ ခုတင် ၄၄လုံးရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ပျှမ်းမျှ ၃၅ ခုတင်လောက် မွေးလူနာတွေ (ရိုးရိုးမွေးရော၊ ခွဲမွေးရော) ရှိတယ်။ အဲဒီ အရေအတွက်ကို ညတာဝန်ကျအတွက် ဆရာဝန်တစ်ဦး၊ အထက်တန်းသူနာပြုတစ်ဦးနဲ့ သူနာပြု နှစ်ဦး၊ စုစုပေါင်း ၄ဦးပဲ ဘောပေါ်က စာရင်းမှာရေးထားတယ်။ တာဝန်ကျဆရာဝန်နဲ့ အထက်တန်းသူနာပြုက သက်ဆိုင်ရာအခန်းထဲမှာ နေတယ်။ သူနာပြု ၂ဦးကတော့ တစ်ဦးက ဖောင်တွေမှာ ရေးတာချွတ်တာတွေ့တယ်။ တစ်ဦးက လူနာ ၃၅ဦးလောက်အတွက် တောင်ပြေးမြောက်ပြေး၊ တကယ့်ကို တစ်ချက်မှ မနားရဘူး။ မာရသွန် အပြေးကျင့်လို့တောင်ရတယ်။ ဟိုဘက်က ဆရာမရေ လာပါဦးခေါ်လို့ ပြေးလိုက်၊ ဆေးသွင်းအပ်တွေ လုပ်ပေးလို့ မပြီးသေးဘူး။ ဒီဘက်က ဆရာမရေ လာပါဦးခေါ်လိုက်၊ ညလုံးပေါက်ကို လုပ်ရတာပါ။ မနက်ကျတော့ သူနာပြု ၂ယောက် ဒေါသတွေ အရမ်းထွက်နေပြီ။ မျက်နှာက ရှစ်ခေါက်ချိုး။
အဲဒါကြောင့် အခုဖြစ်ရပ်မှာ ဆေးရုံအဆင်မပြေတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ထင်မိတာပါ။
သည်အကြောင်းဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ အမလေဖြတ်လို့ ဆေးရုံကြိး အရေးပေါ်သွားတာ
လေဖြတ်တဲ့သူကို သံကုတင်ပေါ်တင်ထားပြိး ပစ်ထားတာ၊မနေနိုင်လို့ ဆယ်ခါလောက် သွားပြောတော့မှ
ဆေးတစ်လုံးလာထိုးပေးတယ် စရိတ်မျှပေးလို့သာ ပြောတာပါ အဲဒိညပဲ ငွေနှစ်သိန်းလောက်ကုန်တယ်
တွန်းလှည်းကုလားတောင် သုံးထောင်ပေးရတယ်၊ လူနာစောင့်ဖို့ ကုလားထိုင်ယူလာတာ အခန်းစောင့်က
နှစ်ထောင်တောင်းတယ်၊တစ်ကယ့်ကို စရိတ်မျှပေးရတဲ့ ကျန်းမာရေးပါဗျာ ဒါ့ကြောင့်လည်း အထူးကု
ဆေးခန်းတွေ လူစည်တာပေါ့ ။
အစိုးရဆေးရုံတွေမှ ဆရာဝန်/မ တွေက စေတနာထား သဘောကောင်းတော့လဲ.. နက်မတွေက
သောက်ကျင့်ကမကောင်းကျ၊ နက်စ်မတွေ ကောင်းပြန်တော့လဲ ဆြာဝန်တွေက သောက်ဂိုက်ပေးက
သောက်ဘ၀င်က မြင့်မြင့်။ သန့်ရှင်းရေးသမားသောင် သောက်ချိုးကမပြေ။
သောက်ကျင့်တွေက နှစ်ရှည်ပြီမို့ ပြင်ဖို့ကလည်း လွယ်မယ်မထင်..။
မီဒီယာကလည်း ချောင်ပိတ်အရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ ခွေးလိုမျိုးဆိုတော့ ကြိုးလွှတ်ပေးတုန်း
ရေလည်ဟောင်..။ ရေလည်ဟောင်လို့ အနေချောင်မယ်ဆို… တို့လဲ.. ၀ုတ်ဝုတ်..
ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍအတွက် လွှတ်တော်ကချပေးထားတဲ့ဘက်ဂျက်ဘယ်လောက်ရှိသလည်းနဲ့ တိုင်းတာရမယ်ထင်မိတယ်…
ဘက်ဂျက်မလောက်ပဲနဲ့တော့.. တိုင်းပြည်ဆင်းရဲနေလျှက်သားနဲ့တော့.. ဒီလိုပြဿနာတွေ.. ဘယ်လိုမှလုပ်လို့.. ရှင်းလို့ရမယ်..မထင်..ရေးချ.. မထင်..။ :buu:
နေဗာအုံးဗျ… သဂျီးပေါလေ့ရှိဒါ စနစ်ကြောင့်မဟုတ် လူကြောင့်ဆို.. အဲလိုဆို ချာဝံတွေ မကောင်းလို့ ဖစ်တာဟုတ်ဖူးလား…. အနိစ္စ
အမှန်က ဆရာဝမ် ဖြစ်ရမည့်သူတွေက ကွန်ပြူတာဘွဲ့ရဖြစ်လိုဖြစ်၊ ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ် ဆင်းပြီး စက်ရုံမန်နေဂျာမ လုပ်လိုလုပ်..၊ ဆရာဝမ်ကလည်း အယ်လ်စီစီအိုင် စာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်လိုတက် ဩော် ဒွတ်ခ… အဲဒါ သဂျီး ဘိုထင်ဒုံး…
အူးကြောင် … ဘီဒူ့အကြောင်းတွေရေးနေဒါယဲအိုက်ဒါက … တေချင်ဗလား ….. အရေခွံစုတ်ဘီး .. အမြည်းလုပ်ပလိုက်မယ် .. ဂူးးးးးးး ဂါးးးးးး
ဆလာဝံလူတန်းစား ၊ ဆေးရုံအသိုင်းဝိုင်းကို ပေါချင်ရာပေါ .. ဒုတ်ဂဲဘာကွီ … ဟုတ်တယ်လေ … ဒင်းတို့ ထဲက .. တီချို့ ခပ်နည်းနည်း /ခပ်များများက … တောက်ကျင့်မကောင်းဗြဲ … လူကို လူလို မဆက်ဆံတဲ့ အပိုင်းဒွေအများရီး ချိဒယ် … ။ ဟောက်စား ၊ ခြောက်စား ၊ ဖြတ်စားတာကလည်း ပါတေးဒယ် …. ။ အချင်းချင်းတောင် စားခွက်လု ၊ နှာကစ်နေဒါတွေလည်း ချိတယ် … ခွိခွိ … ဘီလိုပဲ ခုတ်နေဂျဂျ … တိုင်းပြီ မဆူရင် ပီးဒါပါပဲ … ဇောင်းထတဲ့ ဆလာဝံ ၊ စိတ်ဓါတ်မပေ့ဒဲ့ ဆလာဝံတွေအတွက်တော့ ဂျန်းမာယေး ၀ံယီး ဌာနက မကွိုင်တွယ်မချင်းတော့ … ဂလို ပတ်တနာ ဒွေ ချိအူးမှာ … အောက်ခြေထိ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး အယေးယူ ဒါတွေ လုပ်တင့်ဒယ် … ထုတော့ဖင့် ..လူရီးဒွေ လာယဲ … လိုအပ်တာများကို မှာစားသွားပါသီ ပျော့စ်ဘီးပျံပျံတွားတာ ချည်းပဲ … ခိခိ ..
ဒီဖက်က ဆူမယောင် အသံထွက်ခဲ့ပေမယ့် … တကယ်တမ်း … ဥက္ကံဘက်မှာတော့ … ဗျင်းသွားပြီ ….. ။
ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုထပ်ဆူပြီး ဘယ်လို ဆုံးရှုံးမှုတွေ ကြုံရဦးမယ် မသိဘူး … ။
မပြောဘူးလို့နေတာပါ…ကိုင်း.မအိ့တုံ..ခု့ကလေးမိ့ခင်ကိစ္စ..ဟုတ်ပြီ သူဗဟုသု့တ မရှိ့လို့ ထားလိုက်တော့.(ကို့ကျမှ့ ဗဟုသု့တ ဘယ်လောက်ရှိ့ကြောင်း ပြပေါ့) ဒီလိုဗျာ.ရန်ဖြစ်လို့ အက်စီးဒင့်ဖြစ်လို့ မြွေကိုက်ခံလာရလို့စသဖြင့်အကြောင်း တစ်ခု့ခု့ကြောင့်ပေါ့ဗျာ.သွေးထွက်သံယိုသေလု့မျှောပါးနဲ့ ဆေးရုံရောက်လာတဲ့အရေးပေါ် လူနာကို ငါ့အစ်မပြောတဲ့ တာဝန်ကျေပါတယ် ပြည့်သူ့ဆေးရုံဆိုတာကြီးက ဆရာဝန်တွေဟာ..ဘာ့ကြောင့် သူတို့လုပ်သင့်တဲ့ဆေးကုမှု့ကို အရင်မပြု့တာလည်း..ဘာ့ကြောင့် ရဲစခန်းခွင့်ပြု့ချက်တွေ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးအတွက် ပိုက်ဆံညှစ်နေတာတွေ..လုပ်ရတာလဲ.အဲ့ဒါတွေကြောင့် မသေသင့်ပဲသေသွားရတဲ့ လူနာတွေ အတွက်…ငါ့အစ်မ ဘာပြောမလဲ..ဆေးရုံရောက်လာတဲ့ လူနာဟာ..ရာဇဝတ်မှု့ကျူးလွန်ခဲ့ရင် ဒါရဲအလုပ်လေ သူ့ကိုဖမ်းလိမ့်မယ်.ချမ်းသာသာ ဆင်းရဲရဲ.လူနာကိုအရင်ကုသရမှာ..ဆရာဝန် အလုပ်မဟုတ်ဘူးလား..မယုံဘူးလား ငါ့အစ်မ.စမ်းသပ်ချင်ရင် ဆေးရုံတစ်ခု့ခု့မှာ.တစ်လလောက်ပဲ လေ့လာကြည့်ပါ ပြည်သူ့ဆေးရုံဆိုတဲ့ အစိုးရဘယ်ဆေးရုံဖြစ်ဖြစ်ပါ..လက်တွေ့မြင်သိ့ရလိမ့်မယ်..တကယ်လို့ မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆို ကျနော်အညာသား.. ရွာထဲက..ခင်ဗျားတင်တဲ့ ပိုစ့်တိုင်းမှာ..တောင်းပန်စာ အမြဲတမ်းရေးပေးမယ်…ကိုယ်တိုင်လေ့လာပါ..ဗဟု့သု့တနည်းလို့ ဆင်းရဲလူနာတွေသေကြရတာလား.ဘာလဲ….ဘာလဲ..ဘာလဲပေါ့.။.ဆွေမျိုးသားခြင်း ကျားကြီး..၁၄ ယောက်ထဲမှာ..ပါရာစီတီမောနဲ့ဘာမီတွန်တောင်ခွဲခြားနားမလည်တဲ့ ငွေပဲမက်တဲ့…အကို နဲ့ဦးလေးဆရာဝန် ၂ ယောက် က ကျနော်အခု့ပြောတဲ့စကားတွေရဲ့ အခိုင်မာဆုံးသက်သေပဲ ခု့ချိန်ထိ့လည်း သူတို့လောင်းရိပ်နဲ့သူတို့ကျေးဇူးအောက်က ကျနော် မလွတ်သေးပါဘူး..ဒါပေ့မယ့် ဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားကတော့ ..သိ့ချင်အစကပြန်ဖတ်ပေါ့…အညာသားတို့ကတော့ ကိုယ့်ပေါင်ကို ပြန်လှန်ထောင်းလိုက်ပြီဗျိုး….
ရော် …. ခက်စ်ဘီ …အကျယ်တ၀င့် မရှင်းတော့ဘူး … ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ….. ဒီပို့စ်ရဲ့ … ရည်ရွယ်ချက်လွဲသွားမှာ စိုးလို့ … ဒီပို့စ်ရေးတာက … ဆရာဝန်တွေ တာဝန်ကျေပါတယ်လို့ ငြင်းပြတဲ့ပို့စ်လည်းမဟုတ် ဘူး … ငြင်းစရာလည်း မလိုဘူး … ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိတဲ့ ဆရာတွေဘယ်လို အချိုးချိုးနေတယ်ဆိုတာ …ကိုယ်တိုင်လည်း မြင်တယ် သိတယ် ကြားထားတယ် …. ။ဒီလို ကိစ္စတွေအတွက် ဆမ လက်မှတ်သိမ်းအောင်ထိ တိုင်ကြားဖို့အခွင့်ရေး ပြည်သူတွေဘက်မှာရှိတယ် …. ငါကိုယ်တိုင်လည်း ….. ဆရာဝန်တွေ … တာဝန်ပျက်ကွက်မှုအပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးထောက်ပြ …. ရေးပြစရာရှိထားတယ်…. ။ ဒါက တပိုင်း ….
အခု … မသာကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ဆူပူအောင် အချောင်ဝင်မွှေတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကို သိစေချင်တာက တပိုင်း …..
မကျေနပ်လို့ … ဆန္ဒပြတာ….. ဒါလှုံ ဆော်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ …. ကာပြောချင်ပြောမယ် …. ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး သေဆုံးမှုတွက် အဲ့ဒီမကျေနပ်ပါဘူး အော်နေသူ တွေထဲ …. ဘယ်သူက ဘယ်လောက် ပံ့ပိုးမှု ပြုခဲ့သလဲ .. အကူငွေဘယ်လောက် သွားလှူခဲ့ကြသလဲ …. ။ ယီးလေးယို … ယီးလေးယိုနဲ့ …. ဆွမ်းကြီးလောင်းဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ် … ဒါကို သိစေချင်တာ …
credit to: FR
အစဆွဲထုတ် တိုင်းပြည်ဆူအောင်လုပ်နေတာကို အောက်ဆီဂျင်ဝင်လုပ်သူတွေ မနည်းမနောပဲ …
မင်းပြောတဲ့ … ရာဇ၀တ်မှုတွေကို ဆေးရုံက ဘယ်လို ကိုင်တွယ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း …. ကြားဖူးနားဝ မမှီ တမှီဖြုတ်ဦးနှောက် ဥာဏ်နဲ့ ရေးပါဦးမယ် … ခုတော့မဟုတ်သေးဘူး…. ။ စာရေးဖို့ အာရုံမရသေးလို့ …. ။ အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်မှုတွေရှိနေတယ် …. တချို့အရာတွေက တသမတ်ထဲပြောလို့မရတဲ့ အပိုင်းတွေရှိတယ် ….
မင်းအမျိုးထဲက ဘာမီတွန်နဲ့ ပါရာမခွဲတတ်တဲ့ ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ လူတွေရှိစေဦးတော့ … အခြားလူအသက်ကယ်ဖို့ဆေးကုရဲတဲ့သတ္တိရှိမရှိဆိုတာကတော့…. ကာယကံရှင်တွေ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံမလုံနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ် ….. ။ ဒီနိုင်ငံမှာ … တရားစွဲတာတွေ ခေတ်စားလာတဲ့အချိန် ….. ရမ်းကု မှန်းကု …ငတ်လို့ကုတဲ့လူတွေ နည်းသွားပါလိမ့်မယ် … ။